Nin hinaaaso darteed isugu qarxiyey Xaflad Aroos!!. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Nin hinaaaso darteed isugu qarxiyey Xaflad Aroos!!.
Nin hinaaaso darteed isugu qarxiyey Xaflad Aroos!!.
Ugu yaraan toban qof, oo ay ku jiraan caruur, ayaa ku dhintey dhowr iyo tobanna waa ay ku dhaawaceen kadib qarax ka dhacay goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada Khartoum ee dalka Sudan.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhacdada uu ku lug lahaa ismiidaamiye, qaraxii ka dhacay agagaarka Xaaji yuusuf, oo ku yaalla bariga caasimada iyadoo dadweyne aad u fara badan ay isugu soo baxeen xaflada Arooska xilliga ay dhaceysay.
Saraakiil ka tirsan Booliska dalkaas ayaa daaha ka qaaday in Ahmed Kucu Dauod, oo 23 jir ah, kana mid ahaa millatariga Sudan uu qarxiyey Bamka isla isagana uu ku dhintay.
Warar kala duwan ayaa ka imaanaya sida uu u dhacay qaraxa iyo waxa uu ahaaba, laakin qaar ka mid ah dad lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in qofka is qarxiyay uu niyad jabay ka dib markii haweeneyda la guursanayey uu doonayey in isaga uu guursado basle ay doortay basle qof kale ay ka dooratay in ay la aqal gasho.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 22-01-2019
Next articleSawiro: Shil khasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho.